Sarimihetsika : Tsy nifanaraka ve Sahoby sy ny Horizon Production? -
AccueilVaovao SamihafaSarimihetsika : Tsy nifanaraka ve Sahoby sy ny Horizon Production?
Sarimihetsika : Tsy nifanaraka ve Sahoby sy ny Horizon Production?
21/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Anisan’ireo trano mpamokatra mavitrika. Maro tamin’ireo mpanara-baovao no taitra raha nahita ny fanambaran’i Sahoby Razafindrakoto, tao amin’ny kaonty Facebook-ny fa namoaka horonantsary vaovao ny trano mpamokatra « Madagasik’art film ». Maro araka izany ireo nametraka fanontaniana hoe : tsy nifanaraka ve i Sahoby sy ny Horizon Production ? « Misy Horizon, dia misy Madagasika’art film », hoy izy raha napetraka taminy ny fanontaniana. « Gérard Razafindrakoto dia anisan’ireo mpilalao sarimihetsika, ary izahay zanany dia namindrany izany talenta izany. Nanangana ny trano mpamokatra Horizon izy. Izaho dia zanak’i Gérard, ary Madagasik’art film zanaky ny Horizon », hoy ihany ny fanazavany.
Araka izany dia mbola mitohy ny famokaran’ny Horizon production, fa manana ny azy manokana ny Madagasik’art film izay natsangan’i Sahoby sy ny vadiny. « Efa nahazo tso-drano avy amin’i Neny sy ny mpiray tampo izahay mivady tamin’ny fanokafana io trano mpamokatra io », hoy hatrany izy.
Volana vitsy taorian’ny nijoroana, dia hivoaka amin’ity 28 febroary ity ny « Herisetra », izay horonantsary voalohany novokarin’izy ireo. Tantara maneho ny fisian’ny herisetra amin’ny endriny maro ao anatin’ny fiarahamonina, ary ahitana ireo mpilalao tanora nefa manana ny talenta amin’ny fahaizana milalao horonantsary.
Tsy nanadino ireo mponina mipetraka eny amin’ny faritra La Réunion Kely ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery sy ny vadiny Ramatoa Rajaonarimampianina Voahangy, indrindra amin’izao fiafaran’ny taona izao. Nahatsiaro manokana azy ireo izy mivady, ka nidina teny ...Tohiny